Ngo-2020, kwafakwa izakhiwo ezi-16 zokulungisa kabusha eStavropol Territory - umagazini i- "Potato System"
Ngo-2020, izakhiwo ezi-16 zokulungiswa kabusha zafakwa eStavropol Territory
Ukwanda kwezindawo eziniselwa ngenkasa esifundeni eminyakeni yamuva sekuyindlela yokuthuthukisa amasu ezimboni zezimboni zeStavropol. Ngokusho kwenhloko yesifunda, uVladimir Vladimirov, ukubuyiselwa komhlaba kungenye yezinto ezithuthukisa ukuthuthukiswa kokuthunyelwa kwamanye amazwe esifundeni.
Manje amahektha ayizinkulungwane ezingama-60 aniselwa esifundeni. Ukunisela izindawo zokulima zesifunda kunikezwa ngemisele emihlanu emikhulu enobude obungamakhilomitha ayizinkulungwane ezine namachibi angama-4.
- Ngo-2020, amabhizinisi ezolimo ayi-16 esifundeni asebenzise izindawo ezintsha zokulungisa kabusha, indawo yawo ephelele yaba cishe amahektha ayizinkulungwane eziyisishiyagalombili. Ukutshalwa kwezimali kwemikhiqizo yezolimo kulezi zinto kudlule ama-ruble ayi-8 billion, ama-1,2% awo anxeshezelwa nguhulumeni ngendlela yoxhaso lokubuyisela ingxenye yezindleko (ama-ruble ayizigidi ezingama-67). Kuze kube manje, izimali zesabelomali sikahulumeni kanye nesifunda esabelwe ukuthuthukiswa kokubuyiswa komhlaba zisetshenziswe ngokuphelele yisifunda, - kusho uVyacheslav Dryiger, iPhini Lokuqala LikaNgqongqoshe Wezolimo eStavropol Territory.
Source: UMnyango Wezolimo Wendawo yaseStavropol
Tags: ukulungiswa kabushaI-Stavropol Territory
Uhulumeni uzokwandisa ukwesekwa kwezibonelelo zezimboni zezolimo
Isimo sezulu ku-minus, amanani ku-plus